नेकपा नेता देवेन्द्र पौडलका सहयोगीको यौनकाण्ड बाहिरियो ! - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
नेकपा नेता देवेन्द्र पौडलका सहयोगीको यौनकाण्ड बाहिरियो !
तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराको यौन काण्ड सेलाउन नपाउंदै नेकपाकै अर्का प्रभावशाली नेताका सहयोगी तथा माओवादी आन्दोलनका नेताको यौन काण्ड पर्दाफास भएको छ। यसको पछिल्लो सिकार भने नेता देवेन्द्र पौडेलका राजनीतिक सल्लाहकार मुछिन पुगेका छन् ।
पौडेलका सहयोगी जगन्नाथ आचार्य ९तत्कालिन कमरेड विज्ञान० माथि तत्कालिन माओवादी कार्यकर्ता समेत रहेकी एक युवतीले यस विषयमा खुलासा गरेकी छन् । यो खुलासासंगै नेकपाभित्रका धेरै यस्ता काण्ड खुल्ने पक्का छ । बिहे गरेको २१ दिनमै जनयुद्धमा आफ्नो श्रीमान गुमाएकी एक नारी खिमा रिजालले आफ्ना अनुभवहरु बाहिर ल्याउने क्रममा जगन्नाथ आचार्यले महिलाहरुमाथि गरेको दुव्र्यहारको भण्डाफोर गरेकी छन् ।